किन तपाईको ब्रान्डलाई विशेष रूपमा कस्टम प्रिन्टेड बक्सहरू चाहिन्छ - Print Peppermint
जनवरी 7, 2022 | ब्रान्डिङ, प्रिन्ट डिजाइन, मुद्रण
सबै कुरा मानिन्छ, कस्टम मुद्रित बक्सहरू चीजहरू बन्डलिङको लागि महत्त्वपूर्ण छन्, अझै पनि विभिन्न रोजगारहरूको वर्गीकरणको लागि। यी क्रेटहरू ग्राहकहरूको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न संरचना र आकारहरूको वर्गीकरणमा आविष्कारशील नवीनता समावेश गरी बनाइएका छन्।
सुधारात्मक वस्तु, रत्न, विद्युतीय मेसिन, खाद्य वस्तु, वा अन्य चीजहरू समेट्नका लागि अनुकूलित बन्डलिङ जवाफलाई कुनै पनि कुराले हराउँदैन।
तपाईंको ब्रान्डलाई मुद्रित बक्सहरू चाहिने कारण यहाँ छ।
विशेष रूपमा मुद्रित बक्सहरू - बाध्यकारी चिन्ह लगाउनको लागि इष्टतम उपकरण
यो कसरी हो कि तपाइँ तपाइँको व्यवसाय को विज्ञापन को लागी यति ठूलो मौका बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ? नियमको रूपमा, संयुक्त राज्य अमेरिकामा बन्डलिङ संस्थाहरूले विशेष रूपमा मुद्रण प्रशासनहरू पनि प्रस्ताव गर्छन् कस्टम मुद्रित बक्सहरू.
तपाईंको नाम दिनुहोस् कस्टम मुद्रित बक्सहरू तपाईको लोगो, मस्कट, स्लोगन र अन्य मार्किङ डेटाको साथ। छापिएका पार्सलहरूले तपाईंलाई ब्रान्ड खुलापन बढाउन मद्दत गर्न सक्छन्।
खुद्रा विक्रेताहरूको लागि उपयोगी
पसलहरूमा, खुद्रा विक्रेताहरूले विभिन्न ब्रान्डका वस्तुहरूको वर्गीकरण स्टक गर्छन्। तिनीहरू वस्तु बन्डलहरू प्राप्त गर्न मनमोहक हुनेछन् जसले स्ट्याकिङ रिटायर गर्न आवश्यक वस्तु डेटा दिएर उनीहरूको जीवनलाई अझ सीधा बनाउँदछ।
घटनामा कुनै वस्तु समाप्त हुन गइरहेको छ भने, स्टोरले यसलाई आशा गर्न सकिने छिटो बेच्ने प्रयास गर्नेछ। तपाईसँग थोरै मात्रामा वस्तुहरू छन् भनी प्रबन्ध गर्नको लागि यसलाई खोल्नु अघि क्रेटमा रहेको वस्तुको डाटालाई विक्रेताहरूका लागि प्रयोग गर्न सजिलो हुनेछ।
बिन्दुमा जब ग्राहकहरू विभिन्न वस्तुहरू वा ब्रान्डहरू खोज्न स्टोरमा जान्छन्, तिनीहरूले वस्तु बन्डलिङ देख्न सक्छन्।
प्रत्येक विशेष सूक्ष्मताहरू थप्नुहोस्
प्रत्येक बन्डलिङ फर्मले तपाइँलाई चाहिने आकारहरू सीमित पार्दछ।
एक प्रिन्टिङ फर्म, त्यसपछि फेरि, तपाईंलाई विशेष जानकारी, उदाहरणका लागि, वस्तु मोडेल, ल्याप्स मिति, साइज, रकम, र अन्य यातायात सम्बन्धित डेटा मद्दत गर्न सक्छ। ढुवानीको समयमा बन्डलहरूको पदार्थलाई राम्रोसँग व्यवहार गर्नको लागि, तपाईंले मानकीकृत ट्यागहरू, महत्त्वपूर्ण छविहरू, वा वस्तु कोडहरू छाप्न सक्नुहुन्छ।
उदाहरणका लागि, कमजोर चीजहरूको बारेमा सल्लाहले तपाईंलाई तपाईंको व्यापारिक सामानको असहाय व्यवहारले ल्याएको दुर्भाग्यहरूबाट टाढा राख्न मद्दत गर्न सक्छ।
तपाईंको छविलाई बाँकी बाहेक खडा हुन दिनुहोस्
ब्रान्ड पहिचान योग्य प्रमाण र समीक्षालाई परिमार्जित ब्रान्ड योजना वा आकर्षक छायांकनहरूसँग बन्डलिङ बक्सहरू प्रयोग गरेर विस्तार गर्न सकिन्छ।
तपाइँको मास बन्डलिङ तपाइँको सम्भावित क्लाइन्टको लागि ध्यानयोग्य हुन सक्छ जब यो एक क्षेत्रको साथ सुरु गर्न अर्कोमा वा खुद्रा विक्रेताको क्षेत्रमा सारियो। अनुकूलन मुद्रित बक्सहरू बहु प्याकेजहरूले ग्राहकहरूलाई तपाईंको छवि बुझ्नको लागि यसलाई अझ सरल बनाउनेछ।
किन रिटेलरहरूको बढ्दो संख्या हाल र्याक चीजहरूको लागि विशेष रूपमा मुद्रित बक्सहरू तिर झुक्छ
अमेरिकाको खुद्रा व्यापार, विश्वको बाँकी भाग जस्तै, नवीनतम चीजहरू वरिपरि केन्द्रित छ। यस उद्देश्यका लागि, को उपयोग कस्टम मुद्रित बक्सहरू अमेरिका मा आरोहण मा छ।
व्यक्तिहरूले उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू दिएर सम्झौता र ग्राहक नम्बरहरूलाई समर्थन गर्न तिनीहरूको फाइदा उठाउँदैछन्। ग्राहकहरूमा स्थायी प्रभाव पार्नको लागि दर्जी-निर्मित बन्डलिङ जवाफहरू प्रयोग गर्नु उद्यमीहरूको लागि उत्कृष्ट विकल्प हुन सक्छ।
अमेरिकाका खुद्रा विक्रेताहरू बढ्दो प्रतिस्पर्धा र तीव्र अर्थव्यवस्थाको बारेमा धेरै सचेत छन्। पछि, तिनीहरू redid बन्डलिङ व्यवस्थाहरूमा उत्सुक छन्। तिनीहरू दुई ग्राहकहरू र खुद्रा विक्रेताहरूको लागि ठूलो संख्यामा फाइदाहरूसँगै छन्।
थप फलदायी गुणहरूको एक भाग तपाईंलाई विचार दिनको लागि पहिलेका रेखाहरूमा वस्तुबद्ध गरिएको छ। तपाईंको संगठनलाई वर्तमान कटथ्रोट व्यापार क्षेत्रहरूमा ह्याङ्ग आउट गर्न मद्दत गर्न स्मार्ट विकल्पहरूमा बस्नुहोस्।
किन कार्डबोर्ड मुद्रित बक्सहरूको पुन: प्रयोग महत्त्वपूर्ण छ
कार्डबोर्ड प्याकेजिङ्ग हामीले सोचेको भन्दा धेरै लाभदायक साबित भएको छ। यसले प्याकेजिङ उद्योगलाई अभूतपूर्व उचाइमा पुर्याएको छ।
कार्डबोर्ड बक्सहरू विभिन्न आकारहरू, आकारहरू, शैलीहरू र डिजाइनहरूमा हुन्छन्। तिनीहरूसँग तपाईंको सामानको उपस्थिति पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्ने र ग्राहकहरूको ध्यान खिच्ने क्षमता छ।
तपाईंको व्यापार पहिचान प्रतिबिम्बित गर्न सबैभन्दा ठूलो दृष्टिकोण मुद्रित गत्ता बक्स संग छ।
तिनीहरूलाई आफ्नो प्राथमिकता अनुसार अनुकूलित गरेर एक प्रकारको शैली सिर्जना गर्नुहोस्। तपाईंको ब्रान्ड यसको परिणामको रूपमा स्टोर शेल्फहरूमा खडा हुनेछ। यो व्यावहारिक रूपमा हरेक घरमा सबैभन्दा प्रचलित वस्तु हो।
पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने गत्ता प्रयोग गर्नु किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा यहाँ छ कस्टम मुद्रित बक्सहरू:
तपाईलाई कार्डबोर्ड बक्सहरूको बारेमा के जान्न आवश्यक छ
के तपाइँसँग कार्डबोर्डको साथ कुनै अनुभव छ? "पुरानो नालीदार गत्ता (OCC)" यो सामग्रीको लागि अर्को शब्द हो।
यो रिसाइकल गर्न सजिलो सामग्री मध्ये एक हो। यो विभिन्न को उत्पादन मा कार्यरत छ कस्टम मुद्रित बक्सहरू.
यसको विभिन्न क्षेत्रहरूमा धेरै अनुप्रयोगहरू छन्। यो पदार्थ बनाउन पेपर पल्प प्रयोग गरिन्छ। पल्प काठबाट आउँछ।
तपाईले यसलाई पुन: प्रयोग गरिएको काठको चिप्स र टिम्बर मिलबाट बचेको शेभिङबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अनाज कस्टम मुद्रित बक्सहरू, ट्वाइलेट पेपर रोल, पेपर तौलिया, र दूध वा जुसको डिब्बा सबै यसबाट बनाइन्छ।
यसलाई पुन: प्रयोग गर्नुको महत्त्व के हो?
कार्डबोर्ड रिसाइकिलिंग विभिन्न कारणहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंले तिनीहरूलाई पुन: प्रयोग गर्ने कारणहरू बारे जान्न अघि कुन प्रकारका कार्डबोर्डहरू पुन: प्रयोग गर्न योग्य छन् भनेर जान्नुपर्दछ।
यदि तपाइँ यसलाई पुन: प्रयोग गर्नका लागि सङ्कलन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, पहिले यो सफा र सुक्खा छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्। रिसाइकल बिनमा कार्डबोर्ड बक्सहरू राख्नु अघि, तिनीहरू सबै समतल हुनुपर्छ।
यो पनि पुन: प्रयोग गर्न सकिन्छ यदि त्यहाँ थोरै प्रदूषण जस्तै ग्रीस वा तरल पदार्थ छ। Waxed गत्ता रिसाइक्लिंग को लागी उपयुक्त छैन। यहाँ यसलाई रिसाइकल गर्न केही बाध्यकारी कारणहरू छन्।
अनुकूलन ढुवानी बक्सहरू प्रयोग गर्ने फाइदाहरू
यसबाहेक, किनभने गत्ता कस्टम मुद्रित बक्सहरू प्रायः क्यूबोइडहरू (आयताकार प्रिज्महरू) हुन्छन्, तिनीहरू ढुवानी गर्न सजिलो हुन्छन् किनभने तिनीहरू थोरै वा कुनै खेर गएको ठाउँ नभएको ट्रकहरूमा राम्ररी स्ट्याक हुन्छन्।
ट्रक डेलिभरी वातावरणमा सबैभन्दा ठूलो प्रहार हो जुन उद्यमहरूले डेलिभर गर्न सक्छन्, तिनीहरूले सञ्चालन गर्ने क्षेत्रहरूमा वायु प्रदूषणको ठूलो मात्रा उत्पादन गर्दछ।
अनुकूलित ढुवानी दक्षता - अर्थात्, कम ट्रक ढुवानी - वायु प्रदूषण न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दछ।
क्यूबोइड आकारको बक्सहरूले लरीहरू लोड गर्न मद्दत गर्दछ, परिणामस्वरूप ट्रकहरूबाट कम फरक डेलिभरी र उत्सर्जनमा कमी हुन्छ।
तिनीहरू पुन: प्रयोज्य, पुन: प्रयोगयोग्य, र वातावरणीय रूपमा सचेत छन्। यी थोक पुनर्नवीनीकरण गत्ता कस्टम मुद्रित बक्सहरू प्राकृतिक सामाग्रीबाट बनाइएको हो।
पहिले उल्लेख गरिएझैं, पल्प रूखको काठबाट बनाइन्छ, जसलाई त्यसपछि कागजको पातलो पानामा प्रशोधन गरिन्छ। तपाईले प्रयोग गर्न चाहनुभएको सामग्रीको आधारमा, प्याकेज मोटाई बढाउन सकिन्छ।
तसर्थ, तपाइँको आवश्यकताहरु मा निर्भर गर्दछ, तपाइँ पातलो क्राफ्ट कार्डबोर्ड बक्स देखि बाक्लो नालीदार बक्स सम्म केहि पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। बहु प्याकेजहरू पुन: प्रयोज्य, पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने, र वातावरण मैत्री कार्डबोर्ड अनुकूलन मुद्रित बक्सहरू प्रदान गर्दछ।
कसरी अद्वितीय रूपमा रिटेलरहरूको लाभको लागि बक्सहरू रेकर्ड प्रदर्शन गर्नुहोस्
तपाईंको वस्तु अनुकूलन प्रदर्शन बक्सहरू खुद्रा पसल र स्टकरूम र्याकहरूमा छिटो सेट गर्न सकिन्छ। तपाइँसँग तपाइँको कन्टेनरहरू असामान्य रूपमा छापिएको छ भनी मान्दै, संरचनामा प्रवेश गर्ने र छोड्ने प्रत्येक व्यक्तिले तिनीहरूलाई जाँच गर्नेछ।
स्पष्ट ब्रान्ड प्रगति
यो केहि हदसम्म निर्विवाद छ, तर यसले यसलाई कम आवश्यक बनाउँदैन। त्यहाँ, सबै चीजहरू विचार गरिन्छ, एक्सपोजरको अतिरिक्तको रूपमा अविश्वसनीय चमत्कार।
तपाईको फर्मले सधैं आफ्नो उद्देश्य बजारमा सम्पर्क गर्ने तरिकाहरू भन्दा राम्रोको लागि निगरानी राख्नुपर्छ, र अनुकूलन प्रदर्शन बक्सहरू एक आँखा प्राप्त संगठन लोगो संग यस्तो गर्न को लागी एक निश्चित तरीका हो।
कार्डबोर्ड बक्सहरू नियमित रूपमा सबैभन्दा व्यावहारिक बक्सहरू थिच्ने व्यवस्थाहरू मध्ये एक हो। अपरिष्कृत पदार्थहरू अद्वितीय बनाउन आवश्यक छ अनुकूलन प्रदर्शन बक्सहरू नियमित रूपमा किफायती छन्, विभिन्न विकल्पहरू भन्दा बढी किफायती पद्धतिको बारेमा ल्याउँछ।
निजीकरण र मुद्रण निर्णयहरूले लागत बढाउँदा, निश्चित नतिजा अझै पनि संवेदनशील रूपमा मूल्याङ्कन गरिन्छ, विशेष गरी संगठनहरूको लागि जसले ठूलो मात्रामा आफ्नो सामूहिक बन्डलिङ खरिद गर्दछ।
यसबाहेक, क्रेटको नम्र वजनले उद्यमलाई ढुवानी खर्चहरू धेरै कम गर्न अनुमति दिन्छ। बाक्लो अनौठो मुद्रित बक्सहरूले पनि धेरै तौल राख्दैनन्, संगठनहरूलाई कम नगदमा थप चीजहरू पठाउन अनुमति दिन्छ।
← कसरी एक आदर्श रिजुमे डिजाइन गर्ने
ल्याब कलर स्पेस के हो? र तपाईलाई यसको बारेमा के थाहा हुनुपर्छ? →